United Airlines dia mandefa serivisy tsy an-kiato avy any San Francisco mankany Pape'ete, Tahiti
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » United Airlines dia mandefa serivisy tsy an-kiato avy any San Francisco mankany Pape'ete, Tahiti
Ny United Airlines dia nanomboka ny serivisy amerikana tokana mankany amin'ny Nosy Tahiti. Nanangana ny sidina voalohany teo anelanelan'ny San Francisco sy Pape'ete, renivohitr'i Tahiti ny zotram-pitaterana an'habakabaka. Ao anatin'ny fankalazana azy voalohany, nanambara ihany koa i United fa manitatra ny fandaharam-potoanany Tahiti ho amin'ny serivisy mandavantaona avy any San Francisco.
"Faly izahay manitatra ity sidina mahaliana ity amin'ny fandaharam-potoana mandavantaona," hoy i Janet Lamkin. "Ho an'ny Kalifornia sy ny mpanjifantsika mifandraika mamaky an'i San Francisco, ity lalana ity dia manome fialofana mankany amin'ny zoro paradisa kely."
Ny sidina iraisam-pirenena vaovao an'ny United dia manolotra vavahady mora ho an'ny nosy Polinezia frantsay misy an'i Mo'orea, Bora Bora, Marquesas ary Rangiroa. Manomboka anio, ny serivisy United an'i Tahiti dia miala amin'ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena San Francisco amin'ny talata, alakamisy ary alahady. Manomboka amin'ny 30 martsa 2019, United dia hanomboka fanompoana mandritra ny taona amin'ny talata, alakamisy ary asabotsy. United dia hiasa ny zotra miaraka amin'ny fiaramanidina Boeing 787 Dreamliner mandritra ny taona.
Miala ny Pair City City tonga
UA 115 San Francisco - Tahiti 2:45 pm 9:25 pm
UA 114 Tahiti - San Francisco 11:45 alina 9:50 maraina rahampitso
Ny hetsika fizahan-tany dia manokatra fanjakana afrikana atsinanana